हाम्रो संविधानका चार खम्बा छन् : प्रचण्ड
कास्की, २४ मङ्सिर । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसका केही नेताहरु शान्ति, संविधान र परिवर्तनप्रति बेखुस भएको बताएका छन् ।
सोमबार कास्कीको सिक्लेसका निर्माण गरिएको शान्ति स्तुपाको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘गीरिजाबाबू र सिटौलाजीले जोखिम मोल्नुभो, शान्ति प्रक्रिया टुंगाउनुभयो । हामी सबै गणतन्त्रमा आयौं । तर, कांग्रेसका कतिपय नेताहरु संविधान र परिवर्तनप्रति बेखुस देखिन्छन् । संविधानका विरुद्ध खुलेआम वक्तव्य आउन थालेका छन्, यो के चीज हो ?’
‘हाम्रो संविधानका चार खम्बा छन्’ प्रचण्डले भने, ‘गणतन्त्रको खम्बा, धर्मनिरपेक्षताको खम्बा, समावेशी–समानुपातिकताको खम्बा र सङ्घीयताको खम्बा । एउटा खम्बा ढल्दा अरु खम्बा बाँकी रहँदैनन् । के हामीले संघीयताको विरोध गरेर गणतन्त्र पनि ढाल्न खोजेको हो ?’
प्रचण्डले परिवर्तनविरोधी शक्तिले जहिले पनि टाउको उठाउन खोज्ने बताए । कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइरालाप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दा लोकतन्त्र बाँकी रहन्छ ? त्यत्रो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट ल्याएको परिवर्तन ढाल्न नखोज्नुस् ।’